गुगल अकाउन्ट भरियो ? यसरी गर्नुहोस् खाली - Mero Mechinagar
गृह सूचना / प्रविधिगुगल अकाउन्ट भरियो ? यसरी गर्नुहोस् खाली
गुगल अकाउन्ट भरियो ? यसरी गर्नुहोस् खाली
गुगलले आगामी आफ्नो स्टोरेज नीतिमा ठूला सुधारहरु ल्याउने घोषणा गरेको छ । यी सुधारले हालका गुगल तथा जिमेल अकाउन्ट होल्डरमा ठूलो प्रभाव पार्ने छ ।
अघिल्लो लेखमाफ्रान्स घरेलु हिंसाका पीडतलाई उद्धार गर्न गएका तीन प्रहरीको हत्या
अर्को लेखमानेपाल स्टक एक्सचेन्जले वर्सेनि सरकारलाई उत्कृष्ट लाभांश दिँदै